Alahady 31/01/2016 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
«Masoandro be lohataona ny fitiavan’Andriamanitra ka tsy mifidy olon-kosoavina”
Mamintina ireo Vakiteny novakiana tamintsika androany io lohahevitra io. Avy hatrany dia raisintsika ny Evanjely, izay mitohy amin’ny Evanjely tamin’ny heriny: i Jesoa tonga tany amin’ny tany nahabe azy, any Galilea; araka ny fanao amin’ny andro Sabata dia miditra ao amin’ny Sinagôga izy.Gaga sy talanjona ny olona tao amin’ny Sinagôga noho ny fampianarana sy ny tenim-pahasoavana nentin’i Jesoa tamin’ireo olona ireo, dia teny fankaherezana satria izay no antony nahatongavan’ny Mesia: hitondra fanafahana amin’ny gejan’ny fahotana. Fa tao ny gaga, ary tao koa ny nanao hoe: “tsy ilay zanaky ny mpandrafitra ve ity?” fa hoy i Jesoa: “Tsy misy Mpaminany tsy heni-kaja raha tsy amin’ny tany nahabe azy ihany.” Ny fampianarana nataon’i Jesoa dia fampianarana feno fahendrena, feno fahamarinana, ary maro ny nandray izany fa tao kosa ny olona nandray zavatra hafa: tsy ilay fampianaran’i Jesoa no noraisiny fa ny fahafantarany an’i Jesoa amin’ny maha-olombelona azy. Matetika ny fiheverantsika ho manana an’Andriamanitra no lasa vato misakana antsika tsy hiroso lalindalina kokoa amin’ny fiainana ny finoana. Ka ny zavatra nangatahin’ireo olona sasany dia hoe: “Ny zavatra renay nataonao tao Kafarnaôma dia ataovy aty amin’ny tany nahabe anao koa.”
Inona moa no nataon’i Jesoa tao Kafarnaôma? Tao no nisy ny ankamaroan’ny mpianatra nantsoin’i Jesoa. Kafarnaôma dia toerana ivezivezen’ny karazan’olona rehetra, ary ny ankamaroan’ny mponina ao dia olona tsy mpino, tsy mahalala an’Andriamanitra ; ao ny mpiasan’ny ladoany, ao ny mpamory hetra, sns … satria toerana malaza ara-toe-karena izy io. Ka araka izay koa, rehefa manan-karena ny firenena iray, dia manjaka koa ny kolikoly isan-karazany. Kanefa mahagaga fa tao i Jesoa no nanao fahagagana be dia be. Ka rehefa tonga tao Nazareta i Jesoa dia ren’ny olona ny lazany, ary nangataka izy ireo ny mba hanaovan’i Jesoa toy izany koa tao amin’ny tany nahabe azy. Saingy nomen’i Jesoa tsiny ireto olona ireto satria izao no tsara ho fantantsika: ny fangatahana famantarana amin’Andriamanitra dia maneho tsy finoana. Firifiry moa ny fahagagana nataon’i Jesoa teo amin’Israely? Ary firy tamin’ireo no nahalala nibebaka? Ary io no ataon’ny olona fakam-panahy ankehitriny: milaza ny olona hoe “ianareo izay mila fanasitranana, tongava aty”, dia ahorina amin’ny fahagagana ny finoana. Nefa na ny demony koa aza dia afaka manao fahagagana. Araraotin’ny olona ny fahantrana, ny fahasahiranana misy eo amintsika mba hahatonga ny olona hitady famonjena etsy sy eroa; ary tonga amin’izay ny karazam-pivavahana rehetra, ka ireo kely finoana dia lasa any tokoa.
Nanazava amin’izay i Jesoa: ny olona tsy isan’ny vahoaka voafidy, tsy mahalala an’Andriamanitra koa, no nanirahan’Andriamanitra ny Mesia, hahazo fahasoavana. Ka indraindray isika manontany tena hoe amin’ny fomba ahoana no hanantonako an’Andriamanitra? manoloana ny fahalementsika, amin’ny maha olombelona antsika; ahoana no hihainoan’Andriamanitra ahy amin’izao toetrako feno fahotana izao? Indraindray koa nefa lasa mitsaratsara foana ny namana, lasa mitovy amin’ireo Jody niray tanindrazana tamin’i Jesoa, manavaka, manilika ireo izay heverina ho tsy mitovy amin’ny tena, mihevitra ny tena ho efa voavonjy. Ary raha toa ka izay no zavatra mitranga dia ireo no lasa voalohany mankany amin’ny fahaverezana. Fa ireo mahatsapa tena fa mpanota nefa manantona an’Andriamanitra no ho voavonjy. Koa aoka isika tsy hatahotra, tsy hihemotra manoloana izay mety ho fahotantsika fa n’inon’inona fahalemena, n’inon’inona kilema, olombelona isika, aza manalavitra an’Andriamanitra. Hafa ihany ny mivavaka, na manao ratsy aza, satria mahalala hoe hatreto ny fetrany, mbola ao ilay tahotra an’Andriamanitra. Tian’Andriamanitra foana isika, ary izay no nahatongavany: hamonjy ny very.